> Resource > Ladnaansho > Recuva u Mavericks: Best Recuva Alternative in Mavericks
Waa maxay Recuva?
Recuva waa user-friendly qalab kabashada xogta maammula for Windows. Waxaad isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado files in si qalad ah la tirtiro ka your computer, USB drive, kaadhka xusuusta iyo MP3 ciyaaryahanka. Waa anfacaya oo aad loogama baahna wax xirfadaha kombiyuutarka. Tan ugu muhiimsan, waa lacag la'aan ah (hubaal aad ku deeqdo karaan in ay shirkadda, Piriform).
Sidee ku saabsan Recuva u Mavericks Mac?
, Waxaad Tan iyo Recuva waxaa kaliya loogu talagalay dadka isticmaala Windows ma u isticmaali karaa Mac ah. Markaas waxa isticmaala Mac samayn karaa? Dhab ahaantii, waxaa jira Recuva kale oo u Mac. Halkan aan soo jeediyo waa: Wondershare Data Recovery for Mac . Sida Recuva, taas software awood u inaad samaysid oo dhan Recuva kara on Mavericks Mac ah. Waxaad isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado photos, videos, audio, waraaqaha, email, archives oo dheeraad ah oo ka Mac, drive dibadda adag, kamaradaha, telefoonada gacanta iyo qalabka kale ee lagu kaydiyo. Waa maxay dheeraad ah, waxa ku siinayaa 4 qaabab kala duwan soo kabashada, kuu soo kabsado xogta sida ay xaaladaada khasaaro xog u gaar ah. Waxaa kale oo badan oo sax ah. Qaado sida aad Recuva duwan oo loogu talagalay Mavericks oo soo bixi version maxkamadda hoose si aad u leeyihiin isku day ah oo hadda.
Sida loo isticmaalo this kabashada Recuva u Mavericks aad Mac?
Tallaabada 1. Run iyo dooran hab soo kabasho
Marka aad u Recuva u Mavericks software ku saabsan Mac, aad arki doonaa suuqa kala hoose aad muujinaya 4 hababka soo kabashada. Mid kasta oo ka mid ah waxaa si gaar ah loogu talagalay xaaladaha kala duwan khasaaro xogta. Akhri tilmaanta iyo mid ka mid ah si aad u doorato u gaar ah. Halkan aynu qaataan Recovery File lumay hab tusaale ah. Riix waxaa ku sii gudbayo.
Tallaabada 2. Sawirka drive meesha aad ku badiyay xogta aad
Markaas barnaamijka aad soo bandhigi doonaa oo dhan drives on your Mac, oo ay ku jiraan drives adag dibadda ama aaladaha kale ee la xiriirta kaydinta your computer. Ka mid ah meesha aad ku socoto inuu ka soo kabsado xogta Dooro, oo guji Scan button in tanuna ha Recuva kale soo kabashada xogta Mavericks waxaa laga baarayo.
Skaanka aad qaadan doonta muddo yar. Haddii aad rabto in aad soo gaabin habka, waxaad sameyn kartaa nooca file target in aad rabto in aad soo kabsado adigoo isticmaalaya muujinta ah ee ay u ture File Select . Waxaad ku sameyn kartaa sida video, audio, image, dukumenti, iwm Markaasaad bilaabi scan ah.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan xogta aad rabto
Scan ka dib, dhammaan xogta recoverable tirtiray ee drive ee lagu soo bandhigi doonaa. Waxaad iyaga ku eegaan karo mid ka mid ah. Marka aad u tagtid shayga aad rabto, kaliya waa sax. Kadib markii xogta oo dhan, riix Ladnaansho button iyaga badbaadiya on your computer ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Haddii aad xusuusan magaca file ee aad rabto in aad soo kabsado, si toos ah u waxaad ka raadin kartaa sanduuqa raadinta. Markaasay aad ugu dhakhsaha badan u heli kartaa.
Photo Recovery U Mavericks, Ladnaansho Photos tirtiray ee Mac Mavericks